သိထားသင့်သည့်အချက် (၆) ချက်
🔍🔍🔍*သင်ဟာ သင့်ရုံးခန်းအတွက် Decoration လုပ်ဖို့ရှာဖွေနေပါသလား? 👀👀👀
*ဒါဆိုရင် ရုံးသုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
*ဒါမှလည်းအလုပ်လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် ဘယ်လိုများလက်တွေ့ကျကျ ထိုင်ပြီးအလုပ်ကြမလဲနော်!✍🏼✍🏼✍🏼
Online ပေါ်မှပုံတွေကို ရွေးရုံတင်မကဘဲ ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်ဖို့ သေချာကြည့်ရှု့ပြီးမှ ရွေးချယ်ခြင်းကပိုမိုသင့်တော်ပါတယ်။🏎🚗🚗🏎🚙🚙
*သင်ဟာ သင့်ရဲ့ရုံးခန်းတွက် ပရိဘောဂပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေ ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်ကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ Supplier လိုအပ်ပါတယ်။
ProPlus လိုမျိုး Factory ရှိထားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ 😛😛😛 🛠️⚒️🛠️
အောက်ပါအကြံပြုချက်များက မှန်ကန်သော ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းတွေရွေးချယ်ဝယ်ယူရန်တွက် အကူညီရရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် 👍👍👍
ရုံးသုံးစားပွဲတစ်ခုံရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာကြည့်လို့ကောင်းဖို့ လိုအပ်သလိုခိုင်ခန့်ဖို ဈေးနှုန်းသင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင်ဟာကြီးကြီးမားမားအမှားမလုပ်မိအောင် အခုပဲလေ့လာပြီးတော့မှအပြင်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှာဖွေဝယ်ယူကြမယ်ဆိုရင် ပိုမိုသင့်တော်မယ် လိုယူဆမိပါတယ်။
ကြိုတင်မလေ့လာဘဲဝယ်ယူခဲ့မိရင်တော့ အဲ့လိုဝယ်ယူရာမှာရော ဝယ်ယူပြီးသွားရင်ရော မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်အနှောင့်ယှက်တွေ ဖြစ်ကြရတယ်။ လူတော်တော်များများက အဲ့ဒီ လိုအမှားကိုပြုလုပ်တတ်ကြတယ်။🚫🚫🚫
သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အပ်သည့်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ ပရိဘောဂ တွေကိုရွေးချယ်ဖို့ အဓိကကျပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်~ သင်ဟာ File တွေသိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် Drawer မပါတဲ့ Desk တစ်လုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
စားပွဲခုံရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ files တွေသိမ်းဖို့နေရာလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးဆိုတာ မကြာခင်မှာသင်သိလာပါလိမ့်မယ်။ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေဟာ သင့်ရုံးခန်းမှာ ပုံသေထားဖို့မဟုတ်ရင်တောင် ပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရမယ့်အနေအထားမှာရှိနေရပါလိမ့်မယ်။ ရေရှည်လည်းခံနိုင်ရပါမယ်။
*အဲ့ဒီတော့ သင့်ရွေးချယ်မှုက Storage ပါတဲ့ Desk ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️
(၂)သင့်လျော်သော ပရိဘောဂပုံစံ ရွေးချယ်ခြင်း⚙️⚙️⚙️
သင်ရွေးချယ်ထားရှိလိုက်တဲ့ ပရိဘောဂတွေဟာ သင့် Company ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် (သို့) သင့်စီးပွားရေးရဲ့ image ထင်ဟပ်ပြသစေနိုင်တဲ့အခြေနေရှိတာကို သတိထားသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖိုလိုအပ် Company ဆိုရင် ဝန်းထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် International မှာသပ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းအတာ အနိမ့်အမြင့် အကျယ်အဝန်း ရာထူးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အပြင်အဆင် ရှိသင့်တဲ့ ပရိဘောဂစသည်တို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။
ဒါမှလည်း ကိုယ့်Company ကိုလာရောက်တဲ့ ဧည့်သည်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရုံးခန်းကို မြင်တာနဲ့ ဒီcompany ဟာ စနစ်တကျသေသေချာချာ ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်နေပါလားဆိုတဲ့ အတွေအမြင်ရသွားဖို့ဆိုတာ ပရိဘောဂတွေက အဓိကျတဲ့နေရာမှာပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကို အတွက် သေချာမသိထားဘူးဆိုရင်သင်ဟာ ကျွမ်ကျင်သူတွေဆီက အကြံညဏ်ရယူသင့်ပါတယ်။
Chair တစ်လုံးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Office Setting အတွက်စံထားပြီး သင့်ရဲ့ Height သင့်ရဲ့ Weight တွေကိုထည့်တွင်းစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့် ရောင်းသူတွေက သာတို့ ထိုင်ခုံရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသေချာရှင်းမပြကြပါဘူး! ဒါတွေအတွက် Chair မှာသုံးတဲ့ Accessories တွေရဲ့အရည်အသွေးကို သေသေချာချာသိထားသင့်ပါတယ် ဒါမှပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ပြန်ရတဲ့ အရည်အသွေးကို ချင့်ချိန်နိုင်မှာပါ။
၁။ Chair Gaslift
က Class-2လား class-3 လား? ဘယ်နကြိမ်လောက်အထိ အတင်အချ ပြုလုပ်နိုင်သလဲ? Warranty ကဘယ်နနှစ်ပေးလဲ?
၂။ Base Structure Nylon
ဆိုရင်ဘယ်လောက် Kg ထိသုံးလို့ရလဲ့?
၃။ Seat Using Foam
ကသာမန် ဈေးပေါတဲ့ Foam လား Mould ဖြင့်စနစ်တကျ ထုတ်ထားပြီးပုံစံမပြောင်းနိုင်တဲ့ Foam လား?
၄။ Back Structure Material
ကျောမှီနဲ့ ခါးအတွက် သေချာတွက်ချက်ထားပြီး design ထုတ်ထားတာ လား? ဘယ်လောက် Degree ထိ Back Support ရလဲ?
၅။ Mechanism Detail
Lock ချလို့ရမရ position အရ3Lock လား?4lock လား? စသည်တို့ကိုသေချာမေးမြန်းပြီးဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
အခြားတစ်ခုအနေနဲ့ စဉ်းစားထားရမှာက သင့်ရဲ့ Chair အမြင့်ဟာ Desk အမြင့်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်နေရပါ့မယ်။ သင့် Chair ရဲ့အနေအထားဟာ အရမ်းလည်းနိမ့်မနေအရမ်းလည်းမြင့်မနေဘဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ထိုင်လို့ရမယ့် အနေအထားမှာရှိနေရပါမယ်။
သင့်ရဲ့ ထိုင်ခုံဟာ အဆင်ပြေပြေရှိနေရမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ထိန်းညှိလို့ရနိုင်မယ့်အနေအထားမှာ ရှိနေရပါမယ်။ သင့်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ထိုင်ခုံကာလာဟာလည်း သင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ထားရှိထားတဲ့ ရုံးသုံးပရိဘောဂတွေနဲ့ အရောင် ဒီဇိုင်း သဟဇာတ ဖြစ်နေရပါမယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုထိုင်ခုံရွေးချယ်ခြင်းဟာလည်း သတိထားရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။👍👍👍
အဆိုးဆုံးအခြေနေတစ်ခုက သင့်ရုံးခန်းအကျယ်အ၀န်းကို တိုင်းတာခြင်းမလုပ်ကြတာပါဘဲ။ လူအများစုက အဲ့ဒီတိုင်းတာမှုကိုမေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။
အခန်းအကျယ်ဝန်းတိုင်းတာခြင်းကိုသာ သတိလက်လွတ်ထားမယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်း ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေရောက်လာတော့မှ တံခါးနဲ့မလွတ်တာတွေ နံရံနဲ့မလွတ်တာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတော့မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့မလွယ်ကူသလို စိတ်ရှုပ်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အခန်းအကျယ်အ၀န်းကိုတိုင်းတာဖို့လိုအပ်သလို အဲ့တိုင်းတာမှုကလည်းမှန်ကန်မှုရှိဖို့ဟာ သင့်အတွက်အရးကြီးဆုံးနဲ့ အလိုအပ်ဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(5)သင့်ရုံးခန်းမှာ ပစ္စည်းများ စနစ်တကျထားရှိခြင်း🗄️🗄️🗄️
သင့်ရဲ့စားပွဲခုံအပြင် File တွေ သိမ်းဆည်းဖို့နေရာ ပိုမိုလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ သိမ်းဆည်းဖို့နေရာဟာ စာအုပ်တွေထားရှိဖို့တွက် Book Case တွေဖြစ်လာနိုင်သလို ဖိုင်တွေထားရှိဖို့တွက် File Cabinets တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ထို့ပြင်ပစ္စည်းတွေထားရှိဖို့တွက် Side Tables တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီထက်လည်းပိုနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာအဲ့လို သိမ်းဆည်းဖို့နေရာတွေတွက်ထားရှိဖို့ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ သင့်အခန်းမှာဘယ်လောက်ထားရှိနိုင်မလဲ ဘယ်လောက်နေရာကျန်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပြီးမှသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ပါတယ်။
သင် သိမ်းဆည်းဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းဟာလည်း အခြားပရိဘောဂပစ္စည်းတွေနဲ့ တသားတည်း ဖြစ်နေရပါမယ်။
ပစ္စည်းတွေကို စုပြုံပြွတ်သိပ်ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှမထားပါနဲ့။
သင့်အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ သင်သော်လည်းကောင်း သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သော်လည်းကောင်း အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို ကျော်ခွပြီးရှောင်သွားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ပစ္စည်းတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ စနစ်တကျထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် မဝယ်ခင်ကတည်းကလိုအပ်တဲ့ Furniture တွေအတွက် တိကျတဲ့ layout plan လေးလည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ခုချိန်မှာ ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာထိုင်ပြီးစဉ်းစားဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုပြီး နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေလိုအပ်လာမလဲဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သင်ဟာအခုလိုအပ်တာထက်ပိုမိုပြီးလိုအပ်လာမယ်လို့ အစီအစဉ်ရှိနေခဲ့ရင် စားပွဲခုံအကြီးကြီးတွေ ပိုမိုဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကြီးပေးမ၀ယ်ရအောင် ကြိုတင်စဉ်းစားထားရပါမယ်။
ဒါကြောင့် နောက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ Plan ကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေကို ဂရုပြုထားနိုင်ရင်တော့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရာမှာ စိတ်အနှောင့်ယှက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။